Madaxda DF, Saraakiisha Kenya iyo Raaskambooni oo shir xasaasi ah oo uu ugu soconayo Kismaayo. - Caasimada Online
Home Warar Madaxda DF, Saraakiisha Kenya iyo Raaskambooni oo shir xasaasi ah oo uu...
Madaxda DF, Saraakiisha Kenya iyo Raaskambooni oo shir xasaasi ah oo uu ugu soconayo Kismaayo.
Wafdi Caalami ah oo kasocday dowlada Soomaaliya ayaa maanta waxaa ay gaaren magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose kuwaa oo u kur galaya xaalada amaan iyo mida nolaleed ee magaladaas.
Xubnaha Wafdigan waxaa kamid ahaa Wasiirka gaashaandhiga Xuseen Carab ciise,Taliyaha Ciidamada Xooga dalka Geneal Diini iyo madax kale.
Safarkan Wafdiga dowlada ay ku gaareen Kismaayo ayaa waxaa ku wehlinayay Wariyaal u shaqeeya Warbaahinta Soomaaliya Sida Shabakada Caasimada kuwaa oo diyaarad ka raacay Muqdisho.
Waxaa soconayaya shir loo dhanyahay oo warbixin loogaa dhagaysanayo Saraakiisha horay u joogay Kismaayo waxaaana kulanka ka hadlay Gudoomiyaha Raaskambooni Axmad Madoobe oo ka sheekeeyay sida ay kismaayo ku soo gaareen iyo Xaaladeeda.
Wasiirka Gaashaandhiga Xuseen Carab Ciise oo hadlay ayaa isagana waxaa uu sheegay in maamul loo dhanyahay loo samayn doono Kismaayo.
Taliyaha Ciidamada Xooga dalka Genaral Diini oo isagana meesha ka hadlay ayaa u mahad celiyay Ciidamada Xooga dalka Soomaaliya ee qabsaday kismaayo,waxaana dhanka kale uu sheegay in dagaalka halkiisii ay ka sii wadi doonaan ayna kordhin doonan ciidamada dowlada ee jubooyinka jooga.